Aung Pin Lal: နျူကလီးယားထိတွေ့မှုနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ
၁၉၄၅ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဟီရိုးရှီးမားနဲ့ နာဂါစာကီမြိ့တွေဟာ နျူကလီးယားလက်နက်ဖြစ်တဲ့ အဏုမြူဗုံး(atomic bomb) တွေကို စတင်တွေ့ထိ သိရှိခဲ့ကြတယ်။
အဏုမြူဗုံးရဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကြောင့်ဟီရိုရှီးမားမှာ လူပေါင်း ၇၀၀၀၀ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြပြီး အရေပြားဓါတ်ရောင်ခြည်သင့်မှုနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ရောဂါတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူပေါင်း ၉၀၀၀၀ကျော်ကနေ ၁၆၆၀၀၀ အထိ သေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၀မှာ ဆိုရင်၂၀၀၀၀၀ခန့်အထိသေဆုံးခဲ့ကြရတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း သွေးကင်ဆာ၊ သိုင်းရွိက်ကင်ဆာတွေဖြစ်ပွားလာအောင် ဓါတ်ရောင်ခြည်တွေက တမြည့်မြည့်တိုက်စားခဲ့ကြတယ်။ အခု ၂၀၁၁ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က ဂျပန်အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသ ဆန်ဒိုင်းမြို့တော်မှာ လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ပြင်းအား ၈.၉ရစ်ခ်ျတာစကေးငလျင်ကြီးကြောင့် ပြိုပျက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ နေရာတိုင်းမှာ ပြည့်နှက်ကုန်တယ်။ သေကြေပျက်ဆီးမှုတွေနောက်မှာ ကြီးမားလှတဲ့ဆူနာမီလှိုင်းတွေက ထပ်ချပ်မကွာလိုက်လာခဲ့ပြန်တယ်။ ဆူနာမီလှိုင်းတွေကြောင့် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေ အရာအားလုံးကို ထပ်ကာထပ်ကာ ဖရိုဖရဲပြိုကွဲ ပျက်စီးစေခဲ့ပြန်တယ်။
နျူကလီးယားစက်ရုံတစ်ရုံထဲကို အလည်သွားချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အန္တရာယ်အခန်းတွေကို တစ်ခုစီသွားကြည့်တဲ့အခါ ......
တာဘိုင်အဆောက်အဦးမှာ တာဘိုင်(ယန္တရား)၊ ဂျင်နရေတာ(လျှပ်စစ်ဓါတ်၊ ရေနွေးငွေ့၊ ဓါတ်ငွေ့ထုတ်ပေးသောစက်)၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့စေတဲ့စက်(condenser)၊ နဲ့ ရေအားနဲ့လည်ပတ်တဲ့ ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာစနစ်တွေပါဝင်တယ်။
တာဘိုင်ခန်းတွေမှာ သတ္ထုတွေချိတ်ဆက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခန်းတွေဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ ၁. တာဘိုင်၊ ဂျင်နရေတာတွေက ချောဆီလည်ပတ်မှုနဲ့ အအေးပေးစနစ်တွေကို အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ ၂. ငွေ့ရည်ဖွဲ့စက်နဲ့ ရေအားလည်ပတ်တဲ့စနစ်တွေကတော့ ရေကို ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာတွေဆီ ပို့ဆောင်သယ်ယူပေးတယ်။ ၃. ရေပေးဝေဖြန့်ချီမှုမှာ ငွေ့ရည်ဖွဲ့စက်တွေဆီ အသွားအပြန်ရေတွေလည်ပတ်သွားလာစေတယ်။ ၄. လျှပ်စစ် အဖွင့်အပိတ်ဂီယာအခန်းတွေကတော့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို စက်ရုံအစိတ်အပိုင်းတွေဆီ ပို့လွှတ်ပေးတယ်။ ၅. သတ္ထုရေပြန်လည်သန့်စင်စနစ်မှာတော့ သန့်စင်တဲ့ရေကို အအေးပေးစက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းတွေဆီ ပို့လွှတ်ပေးတယ်။ ၆. ထိန်းချုပ်ခန်း စသဖြင့် အသီးသီးလည်ပတ်နေပါတယ်။ အပြင်ဘက်မှာ ထရန်စဖော်မာတွေရှိမယ်၊ လျှပ်စစ်ကို စက်ရုံဆီဖြစ်ဖြစ်၊ စက်ရုံကနေအပြင်အဆောက်အဦးတွေဆီဖြစ်ဖြစ် ထောက်ပံ့ပို့လွှတ်ပေးတာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ ယူနိုက်တက်စတိတ်က PWR စက်ရုံတွေမှာ ဆောက်လုပ်နေကြအမိုးတွေနဲ့ နံရံတည်ဆောက်မှုတွေမပါရှိပါဘူး၊
အထူးသဖြင့် ရာသီဥတုမပြင်းထန်တဲ့ ကာရိုလိုင်းနာ၊ လူဝီစီယားနားနဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ အဲဒီလို စက်ရုံဆောက်လုပ်မှုမျိုးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားမှာရှိတဲ့ ရော်ဘင်ဆန်စက်ရုံ၊ လူဝီစီယားနားက ၀ါးတားဖို့ဒ် နဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားက ဆန်အွန်နော့ဖရီစက်ရုံတွေဖြစ်ကြတယ်။
(၂၀၁၁ ဇူလိုင်လထုတ် အောင်ပင်လယ် လူမှုဝန်းကျင်မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြပြီးပါပြီ)
Labels: Feature, Nuclear, ဖြိုးဖြိုး